‘टीकापुर गाथें, सुनीलसित,’ मैले भनिहालें,डर लाग्यो ।
म यताउता घुमिरहें । साइकलमा प्रोजेक्टर राखेरहिँड्दा त बाले थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो । बा कति बेला बजारतिर निस्कनुहोला, र म भागूँला भनेर कुरिरहें । सवा दुई बजिसकेको थियो— मलाई छटपटी भइरहेको थियो । भगवान्ले प्रार्थना सुन्छन् भनेको सत्य रैछ । पढिरहेको किताब थन्काउँदै बाले चप्पल लगाउनुभो । बाहिर निस्कनुभो । मेरो अनुहार उज्यालो भो ।
मैले साइकलको क्यारियरमा कार्टुन बाँधें । ह्वात्त चढें र कुदें । मटेराले मलाई कुरिरहेको थियो । डिल्लीले बाटो हेरिरहेको होला । गाउँभरि फिलिमको हल्ला चलाइसकेको होला । कटासेको पुल कटेर घना जंगलमा पसिसकेपछि म कल्पनाको संसारमा दौडिरहें । मेरो कस्तो इज्जत हुने होला हैमटेरामा ! टन्न मान्छे आउलान् । पर्दामा ठूलो रंगीन हिरोहिरोनीको फोटो देखेर क्या रमाउलान् ! वाह !
म मटेरा पुग्दा डिल्ली अमौरीखोलाको पुलमाथि उभेर बाटो हेरिरहेको थियो । मैले खुसी हुँदै वरैबाट साइकलको घन्टी बजाएँ । डिल्ली एक खुट्टामा उभेर नाच्यो । गाईगोरु वनबाट फर्किरहेका रैछन् । पुलछेउ गोठालाको भीड थियो ।म छेउमा पुगेपछि एउटा गोठालोले सोधिहाल्यो, ‘फिलिम कति बेला चलाउँछौ ?’
‘ल म गाईगोरु गोठमा बाँधेर आउँछु,’ उसले भन्यो । ऊ पहिलो दर्शक थियो । मैले याद गरें— थोत्रो सर्ट र थोत्रो पाइन्ट लगाएको थियो । खाली खुट्टा । जिङरिंग कपाल बढेको । ‘टिकटको कति ?’ उसले अल्लि पर पुगेर सोध्यो । ‘पाँचरुपैयाँ,’ मैले सानले भनें । अरू गोठाला ट्वाल्ल परेर मलाई हेरिरहेका थिए । मैले डिल्लीको छेउमा साइकल रोकेँ । हर्षित ऊ नजिक आयो । उसले एक छिन कार्टुनलाई नियाल्यो र मुसुक्क हाँस्यो, ‘यसमा छ ?’
मैले पिसाबको तालबाट जुत्ता जोगाउँदै सोचें— पर्दा अगाडि राख्छु । प्रोजेक्टर पछाडि । तर, समस्या थियो ।पर्दा र प्रोजेक्टरको बीचमा बाख्रैबाख्रा । म मेसो मिलाउँदै थिएँ, कतिबेला हो, छेउलो भुइँमा लत्रिसकेछ । यसोहेरेको त्यसको एकछेउ त बाख्राको पिसाबले भिजिहालेछ ।
आज डिल्लीले कुटाइ खाने भो । म छेउलोमा लागेको पिसाब झट्कार्न खोजिरहेको थिएँ, त्यही बेला कार्टुन बोकेरडिल्ली पस्यो ।
‘भाग्यो भाग्यो, समात समात,’ केटाहरू कराए । भ्यात्त–भ्यात्त दगुरेको आवाज आयो । मैले न्वारनदेखिको बल लगाएर साइकिल कुदाएँ । केटाहरू कराइरहेका थिए, ‘ठग्न पाइँदैन । भोलि यै बाटो त आउलास् !’ मभन्दा अगाडि डिल्ली घर पुगिसकेको रैछ । मलाई देखेर नजिक आयो ।‘तँलाई कुटे ?’ उसले सानो स्वरमा सोध्यो ।